Ogaden News Agency (ONA) – Xogihii Ugu Dambeeyay Jigjiga iyo Ciidanka Itobiya oo Doonaya Inay Ka soo Daadagaan Buuraha Ku Teedsan Jidka – Noora Afgaab
Xogihii Ugu Dambeeyay Jigjiga iyo Ciidanka Itobiya oo Doonaya Inay Ka soo Daadagaan Buuraha Ku Teedsan Jidka – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ June 25, 2014
Wadada dheer ee isku xidha jigjiga ilaa gode ee laga sameeyey laamida aan nafta badan lahayn ama la odhan karo daamur uunba lagushubay ayaa waxaa ilaaliya laga bilaabo Dhagaxbuur ilaa Gode ciidanka loo yaqaano federaalka Itobiya kuwaas ood ku arkeeyso iyaga oo fuushan buuraha wadada garabkeeda ah iyo meelo aay ku wareejiyeen dhufeeysyo. Waxaayna ka rawaxaan shanta galabnimo xiligaas ka dibna cid masoo mari karto. Waxaa kaloo aan lamarin maalinta Axada ah oy nasanayaan ciidankaasi maadama oy ku daalan lixda maalmood ee kale.
Ciidamada ayaa waxaay baryahan danbe ka cabanayeen in ayna sii ilaalin karin wadadaas waayo wadada oo aad udheer iyo ilaalinteeda oo aad u dhibadan, iyo wadanka oo aad u kulul iyo ciidanka oo aayna suuragal u ahaayn in aay buuraha kasoo dagaan iyadoo waliba cuntada loogu geeyo buurta korkeeda oo aad u dhibadan in maalin walba lala fanto. Sidoo kale ciidanka oo aad u karahsan ilaalinta wadadaas dheer iyadoo aan wax soo dhamaanaya jirin.
Waxaa kale oo weheliya sida lasheegayo ciidanka oo loo sheegay heshiish been ah kaas oo ahaa inay liyuu boolisku soo afjarayaan ONLF mudo shan sano ah gudohood kadibna ay kalawareegi doonaan.
Hadaba ciidamada ayaa arkay in ayna arintaas waxba kasoo naaso cadeyn sidaas darteed ciidamadii halkaas ilaalinayey ayaa waxaay codsadeen in aay liyuu boolisku lawareegaan ilaalinta wadadaas, waxayna sheegeen inay ilaalinteeda u dhaanto iyagoo sitoos ah ula dagaalama ONLF halkii ay buurtaas uun kor saarnaan lahaayeen.
Mida kale ciidmada ayaa u arka inay liyuu boolsiku xoolo badan ka helaan dadka shacabka ah marka ay u baxaan baadiiyaha ama dadka reerguuraaga ah sidaa darteed waxaay leeyihiin meesha xoolo badan ayaa nagu dhaafay intaanu wadadan ilaalineynay oo busaarad ayaa nagu dishay meesha.
Arimaha kale ee mudan inaad la socotaan waxaa ka mid ah; Cabdi iley oo baryahan danbe meela shirrarka iyo mediaha ka sheega in uu dhameeyey ONLF, inkasta oo marmar uu afku kaxado. Wuxuu intabadan ka meereysta inuu sheego jiritaanka ONLF arintan darteed ayuu qaar kamid ah masuuliyiinta gobolada Soomaliya uu lacag ku siiyay inay arintaas ka hadlaan oy ONLF ka dhigaan in aay gudaha Soomaliya joogan islamarkaasna ay shabaabka gacansiiyan maadma oo uuna Cabdi iley rabin inuu mediayaha kasoo hadal qaado ONLF.
Sidoo kale Cabdi iley oo islajirataanka ONLF ka cararaya ayaa baryahanba wuxuu amar ku siiyey masuuliyiinta liyuu booliska in ayna soo report-igarenin dhawacyada liyuu booliska ee aay dhawacaan ONLF iyo kuwa ay dilaan midna, gaar ahaan in ayna arintaas u sheegin ciidanka iyo sirdoonka Itobiya, maadama oo uu reportigu yahay majiraan. Wuxuu kaloo amar kusiiyey in aan labuun buunin dhaqdhaqaaqa iyo jirtaanka ONLF. Laakiin arintaasi hadana waay hadhiladahay oo maalin walba waysocota.
Waxyaabaha lala yaabay waxaa ka mid ahaa in Cabdi iley uu xuskii 20kii Ginbood uu kayidhi ONLF maaha shifto, waana khalad in aan ONLF dhahno waa shirto mida kale ONLF maaha nimankaas xabada rida, laakiin ONLF waa inaga sidaas darteed maanta kadib mamaqli karo ONLF waa shifto. Arintaas oy dad badani sacabka u tumeen qaarna aay ka yaabeen waxa uu uga jeedo arintaas qaarna ay uqaateen jileec iyo cabsi kusoo biirtay hada iyo Itobiya ood moodo inay ka caajistay mashruucan dabada dheer ee ONLF iyo hadal haayntiisa.
Waxaa kaloo jirta in boqolaal dhawaca ah maanta iyo shalay la keenay magaalada Jigjiga. Dhawacan oo isugu jira liyuu boolis iyo malashida degmooyinka kililka ayaa waxay soo gaadheen magaaladan Jigjiga. Dhaawacan faraha badan ayaa waxaa ladhigay dhismaha hospitalka waayn ee melez hospital oo dhinaca kamid ah si kumeel gaadh ah loo hagaajiyey loonana qalabeyey. Dhawacan liyuu booliska ayaa hada kahor lagu daweeyn jiray hospitalada ciidanka ethiopia laakiin ciidama ayaa waxaay hada ka horba diideen inay dhigeen hosptialadooda dhaawaca liyuu booliska oo aad u akhlaaq xun islamarkaasna aan u hogaan samin xeerarka iyo sharciyada u yaala goobaha ciidanka ee wax lagu daweeyo.
Hadaba dhaawacan ayaa hada yaala melez hospital, halkaas ooy ciidan liyuu boolis ihi hada gaadhka ka hayaan.